यि यि हुन स्वस्थ र दीर्घ जीवनका नौ रहस्य
classickhabar २०७४ फाल्गुण २१ सोमबार प्रकाशित
मृत्यु कसैको वशमा हुँदैन । तैपनि धेरैजसो मानिस हाँसी–खुसी लामो जीवन जिउन चाहन्छन् । नियमित खानपान र स्वस्थ जीवनशैली अपनाउने हो भने जो–कोहीले आफूलाई फिट राख्न सक्छन्, तनावबाट टाढा रहेर सुखी जीवन जिउन सक्छन् । त्यसका लागि केही टिप्स यस्ता छन् :
१. खुसीलाई साथी बनाउनुहोस्
सधैँ खुसी हुनुहोस् । तपार्इं भित्रैबाट खुसी हुँदा तपाईंंको शरीरमा छुट्टै ऊर्जा आउँछ, जसले तपाईंको शरीरलाई लामो समयसम्म मजबुद बनाउँछ । हाँसोले तपाईंको उमेर पनि स्वाभाविकभन्दा कम गर्छ । दीर्घायु प्राप्त गर्नका लागि लाफिङथेरापी सबैभन्दा प्रभावकारी उपचार मानिन्छ ।
२. स्वस्थ र पौष्टिक आहार
दीर्घायुका लागि पौष्टिक आहार जरुरी छ । स्वस्थ खानाले शरीरलाई फिट राख्छ । त्यसैले फाइबर, ओमेगा ३, फ्याटी एसिड, भिटामिन, मिनरल, प्रोटिन, आयरनलगायत पौष्टिक तत्वयुक्त खाना खाने गर्नुहोस् ।
३. डिएनए याद गर्नुहोस्
उमेर बढ्दै जाँदा हाम्रो शरीरको गुणसूत्रको संख्या कम हुन थाल्छ, जसलाई टेलोमेर्स भनिन्छ । यसका कारण शरीर कमजोर हुन्छ र विभिन्न रोग लाग्न थाल्छन् । डिएनएका कारण हुने यस्ता समस्यालाई रोक्न नसकिने विज्ञहरूले बताउँदै आएका थिए । तर, नयाँ शोधले के खुलासा गरेको छ भने यस्तो समस्या रोक्न सकिन्छ । यदि तपाईंले स्वस्थ खानपान र व्यायाममा पर्याप्त ध्यान दिनुभयो भने टेलोमेर हुने सम्भावना कम हुँदै जान्छ ।
स्वस्थ र दीर्घ जीवनका नौ रहस्य
नयाँ पत्रिका काठमाडौं, १९ फागुन | ०२ दिन अगाडि
४. मानिससँग घुलमिल गर्नुहोस्
स्वस्थ र लामो जीवन बिताउनका लागि मानिससँगको सम्पर्कमा जोडिइराख्नु जरुरी छ, जसले तपाईंमा राम्रो तरिकाले संवाद गर्न सक्ने गुणको विकास गरोस् । मानिसको सम्पर्कमा रहनाले तपाईंलाई एक्लो महसुस हुँदैन र तपाईं खुसी पनि हुनुहुनेछ ।
५. सक्रिय रहनुहोस्
दीर्घायुका लागि तपाईंले आफैँलाई धेरैभन्दा धेरै समय सक्रिय राख्नु जरुरी छ । अरूमाथि निर्भर हुँदा तपाईंलाई तनाव मिल्नेछ । त्यस्तै, तपाईंको शरीरमा रोगको संख्या पनि थपिनेछ । त्यसैले सानाभन्दा साना काम आफैँ गर्ने प्रयास गर्नुहोस् ।
स्वस्थ रहन र लामो उमेर बाँच्नका लागि बिहानको हावा जरुरी हुन्छ । बिहानको सूर्यको किरण र स्वच्छ हावा स्वास्थ्यका लागि धेरै लाभदायक हुन्छ । यस्तो किरणबाट हाम्रो शरीरलाई भिटामिन डी प्राप्त हुन्छ । त्यसैले बिहान ताजा हावा लिनका लागि पनि मर्निङवाकमा निस्कनुहोस् ।
७. नकारात्मक सोचबाट टाढा रहनुहोस्
जब हामी कुनै नकारात्मक विषयमा सोच्छौँ या नकारात्मक सोचका व्यक्तिसँग भेट्छौँ, त्यतिवेला हाम्रो ब्लडप्रेसर बढ्छ र हामी डिप्रेस्ड अनुभव गर्छौं । यसको सीधा असर हाम्रो स्वास्थ्यमा परेको हुन्छ, जसले हामीलाई अस्वस्थ बनाउँछ । यदि तपाईंको चाहना दीर्घायु छ भने नकारात्मकताबाट टाढा रहनु जरुरी छ ।
८. यथेष्ट पानी पिउनुहोस्
स्वस्थ रहनका लागि पर्याप्त मात्रामा पानी पिउनु जरुरी छ, किनकि यसले पाचनतन्त्रलाई ठीक राख्छ । त्यस्तै, शरीरबाट टक्सिन्स निकाल्छ । त्यसैले नियमित रूपमा कमसेकम ८ देखि १० गिलास पानी पिउनुहोस् । बाहिर निस्कँदा पानीको बोतलसँगै बोक्नुहोस् ।
९. निद्रा पूरा गर्नुहोस्
स्वस्थ मन र शरीरका लागि पूरा समय सुत्नु जरुरी छ । नियमित रूपमा कम्तीमा ७, अधिकतम ९ घन्टासम्म सुत्नु स्वास्थ्यका लागि राम्रो हुन्छ । निद्राको कमीले तनाव हुन्छ र धेरै रोग बढाउन सक्छ । मुटुको समस्या, दिमागसँग सम्बन्धित रोग र डायबिटिज हुने सम्भावना निद्राका कारण बढ्न सक्छ ।
स्वस्थ रहनका लागि पर्याप्त मात्रामा पानी पिउनु जरुरी छ, किनकि यसले पाचनतन्त्रलाई ठीक राख्छ । त्यस्तै, शरीरबाट टक्सिन्स निकाल्छ । त्यसैले नियमित रूपमा कमसेकम ८ देखि १० गिलास पानी पिउनुहोस् । बाहिर निस्कँदा पानीको बोतलसँगै बोक्नुहोस् ।नयाँ पत्रिकाले छापेको छ ।